Relationship ကို ထိခိုက်စေမည့် အမှားများ – Gentleman Magazine
ချစ်သူရည်စားဆက်ဆံရေးဆိုတာ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ တကယ်လို့များ လမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးသွားကြပြီဆိုရင်လည်း အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျန်နေခဲ့တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ ? ငါ ဘာများ မှားသွားလို့လဲ? စသဖြင့် မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို သင့်အနေနဲ့ နောက်တစ်ခါ ချစ်သူရည်းစားထားတော့မယ်ဆိုရင် အလားတူစိတ်ပျက်စရာအခြေအနေတွေ မကြုံရအောင် Relationship တွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အမှားတွေကို သိရှိဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
၁။ ပြီးပြည့်စုံမှုကို မျှော်လင့်ခြင်း
ပြီးပြည့်စုံမှုဆိုတာက ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Relationship တစ်ခုကို မရရှိနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ချစ်သူရည်းစားကောင်းတစ်ယောက် ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်သလို အလားတူ ကောင်မလေးမျိုးကိုလည်း မရနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဖူးစာရှင်အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရပြီဆိုရင် အားလုံး ပြီးပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုတဲ့ အစွဲတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်ရှိချစ်သူရည်းစားမှာ အပြစ်တစ်ခုခုတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖူးစာရှင်အစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေပြောတဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Relationship ဆိုတာက ဘယ်လိုဘယ်ပုံဆိုတာတွေကို နားယောင်လက်ခံပြီး ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာဆိုလည်း အမှားကြီးမှားနိုင်ပါတယ်။ Relationship တစ်ခုမှာ အပြင်သူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေထက် ကာယကံရှင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အဆင်ပြေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဘယ် Relationship မှ ပြီးပြည့်စုံနေတာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိစိတ်ကူးတည့်ရာပြောနေတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ လိုက်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မနေပါနဲ့။
ညှိနှိုင်းသဘောတူခြင်းက ကောင်းမွန်တဲ့ Relationship တစ်ခုကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ညှိနှိုင်းသဘောတူခြင်းဆိုတာက မတူညီတဲ့အမြင်၊ လိုအပ်ချက်နဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေရှိနေသူ နှစ်ဦးက နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ့် ကြားအခြေအနေတစ်ခုကို လိုတိုပိုလျှော့လုပ်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပြီး ညှိနှိုင်းပြီဆိုကတည်းက တစ်ယောက်က သူလိုချင်တာကို ရသွားတဲ့ အောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အငြင်းပွားမှုကိုတွေကို အဆုံးသတ်ချင်တဲ့အတွက် အခုတချိန်မှာ အနည်းငယ်အလျှော့ပေးလိုက်ရပမယ့် နောက်တစ်ကြိမ်မှာတော့ သူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ လူနှစ်ယောက်က အပြန်အလှန်အားဖြင့် လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပေးနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကချည်းပဲ လျှော့ပေးရတာများလာပြီဆိုရင် Relationship မှာ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် မတူညီတာတွေကို ညှိနှိုင်းအဖြေရှာမယ့်အစား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှာတော့ သာတယ်နာတယ်မရှိပဲ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မတူညီတာတွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုတော့ ရှာတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းက တစ်ယောက်တည်းအချိန်ဖြုန်းရမယ့် ကိုယ်ပိုင်အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုအချိန်မျိုး မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ သင့်ချစ်သူက လိုအပ်ချင် လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူစုံတွဲတွေက ကော်နဲ့ကပ်ထားသလို အမြဲတမ်းပူးကပ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာ သီးခြားစိတ်ဝင်စားမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ချစ်သူက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားဖို့ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်တည်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ပြောဆိုလာခဲ့ရင် စိတ်ဆိုးစရာ၊ သံသယဖြစ်စရာလို့ မတွေးသင့်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
အချိန်အများစုမှာ ကျွန်တော်တို့တွေက သိပ်မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ပဲ အခြေအနေပိုဆိုးသွားအောင် လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ချစ်သူက ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ မစဉ်းစား မဆင်ခြင်ပဲ လုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ၊ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက အမြဲတမ်းရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဆိုး စိတ်ညစ်ေ်နတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဘာကိုမှမပြောမဆိုခင် အရင်စဉ်းစားပါ။ အခု ငါပြောမယ့်အကြောင်းအရာက အဓိပ္ပါယ်ရှိလား၊ အထောက်အကူဖြစ်လာ၊ အသုံးဝင်လား၊ စာနာမှုရော ရှိရဲ့လားဆိုတာတွေကို ပြန်မေးကြည့်ပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ ဘာမှမပြောပဲ ပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
၅။ ထိန်းချုပ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားခြင်း
ဒီကိစ္စက အရေးကြီးပါတယ်။ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ လိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲဖို့ မဟုတ်ပေမယ့် မသိမသာဆိုသလို့ ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ သင့်တို့ ချစ်သူရည်းစား ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေချာပြန်ပြီး ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက်ထဲမှာ ဘယ်သူက ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ဖို့၊ ပြောင်းလဲဖို့၊ ထိန်းချုပ်ဖို့ လုပ်နေတာလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ အဆင်ပြေနေတယ်ထင်ရပေမယ့် သေချာဆန်းစစ်ကြည့်ရင် အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ခက်ခဲနေတတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို သင့်နည်းလမ်းအတိုင်းပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်၊ အရာရာကို သင့်စိတ်ကြိုက် ပုံသွင်းချင်တယ်ဆိုရင် တဖက်လူအတွက် လက်ရှိဖြစ်တည်မှုက အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောနေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ သင့်ချစ်သူကလည်း သူတို့ရဲ့အမှားနဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို သိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သတိပေးနေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ။
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အမှားတွေကို အရင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးရင်လည်း နောက်မလုပ်မိအောင် ဆင်ခြင်ပါ။ အနာဂတ်မှာ သင့်အတွက် ခိုင်မြဲပျော်ရွှင်ရတဲ့ နားလည်စာနာမှုအပြည့်နဲ့ Relationship တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Relationship ကို ထိခိုကျစမေညျ့ အမှားမြား
ခဈြသူရညျစားဆကျဆံရေးဆိုတာ ထိလှယျခိုကျလှယျတဲ့ အရာတဈခုဖွဈပါတယျ။ အစပိုငျးမှဆိုရငျ ပိုဆိုးပါတယျ။ တကယျလို့မြား လမျးခှဲပွတျဆဲပွီးသှားကွပွီဆိုရငျလညျး အဖွမေရှိတဲ့ မေးခှနျးတှေ ကနျြနခေဲ့တတျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈသှားတာလဲ ? ငါ ဘာမြား မှားသှားလို့လဲ? စသဖွငျ့ မေးခှနျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ တကယျလို သငျ့အနနေဲ့ နောကျတဈခါ ခဈြသူရညျးစားထားတော့မယျဆိုရငျ အလားတူစိတျပကျြစရာအခွအေနတှေေ မကွုံရအောငျ Relationship တှကေို ထိခိုကျပကျြစီးစနေိုငျတဲ့ အမှားတှကေို သိရှိဆငျခွငျနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။
၁။ ပွီးပွညျ့စုံမှုကို မြှျောလငျ့ခွငျး
ပွီးပွညျ့စုံမှုဆိုတာက ဒဏ်ဍာရီတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ဘယျတော့မှ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ Relationship တဈခုကို မရရှိနိုငျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျလညျး အပွဈပွောစရာမရှိတဲ့ ခဈြသူရညျးစားကောငျးတဈယောကျ ဘယျတော့မှမဖွဈနိုငျသလို အလားတူ ကောငျမလေးမြိုးကိုလညျး မရနိုငျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အားလုံးရဲ့စိတျထဲမှာ ဖူးစာရှငျအစဈအမှနျကို တှရေ့ပွီဆိုရငျ အားလုံး ပွီးပွညျ့စုံသှားမယျဆိုတဲ့ အစှဲတဈခုရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လကျရှိခဈြသူရညျးစားမှာ အပွဈတဈခုခုတှခေဲ့မယျဆိုရငျ ဖူးစာရှငျအစဈမဟုတျဘူးလို့ ထငျမိတတျကွပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ တခွားသူတှပွေောတဲ့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ Relationship ဆိုတာက ဘယျလိုဘယျပုံဆိုတာတှကေို နားယောငျလကျခံပွီး ဖွဈအောငျကွိုးစားနတောဆိုလညျး အမှားကွီးမှားနိုငျပါတယျ။ Relationship တဈခုမှာ အပွငျသူတှရေဲ့ ထငျမွငျခကျြတှထေကျ ကာယကံရှငျနှဈဦးစလုံးအတှကျ အဆငျပွဖေို့ပဲလိုပါတယျ။ ဘယျသူမှ ဘယျ Relationship မှ ပွီးပွညျ့စုံနတော မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အဓိပ်ပါယျမရှိစိတျကူးတညျ့ရာပွောနတေဲ့ စံခြိနျစံညှနျးတှနေဲ့ လိုကျပွီး နှိုငျးယှဉျကွညျ့မနပေါနဲ့။
ညှိနှိုငျးသဘောတူခွငျးက ကောငျးမှနျတဲ့ Relationship တဈခုကို ဖွဈစနေိုငျတယျလို့ ထငျပါသလား။ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ ညှိနှိုငျးသဘောတူခွငျးဆိုတာက မတူညီတဲ့အမွငျ၊ လိုအပျခကျြနဲ့ လိုအငျဆန်ဒတှရှေိနသေူ နှဈဦးက နှဈယောကျစလုံးအတှကျ အဆငျပွမေယျ့ ကွားအခွအေနတေဈခုကို လိုတိုပိုလြှော့လုပျယူခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ လိုတိုးပိုလြှော့လုပျပွီး ညှိနှိုငျးပွီဆိုကတညျးက တဈယောကျက သူလိုခငျြတာကို ရသှားတဲ့ အောငျနိုငျသူဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈယောကျကတော့ အငွငျးပှားမှုကိုတှကေို အဆုံးသတျခငျြတဲ့အတှကျ အခုတခြိနျမှာ အနညျးငယျအလြှော့ပေးလိုကျရပမယျ့ နောကျတဈကွိမျမှာတော့ သူဖွဈခငျြတဲ့အတိုငျး ဖွဈအောငျလုပျမယျလို့ စိတျကူးထားတတျပါတယျ။ ဒီလိုတှဖွေဈလာပွီဆိုတော့ လူနှဈယောကျက အပွနျအလှနျအားဖွငျ့ လိုတိုးပိုလြှော့လုပျပေးနကွေရတာပဲဖွဈပါတယျ။ တဈယောကျကခညျြးပဲ လြှော့ပေးရတာမြားလာပွီဆိုရငျ Relationship မှာ ထိခိုကျမှုတှေ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ မတူညီတာတှကေို ညှိနှိုငျးအဖွရှောမယျ့အစား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျးမှာတော့ သာတယျနာတယျမရှိပဲ နှဈဦးစလုံးအတှကျ အဆငျပွနေိုငျပါတယျ။ မတူညီတာတှကေို ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျဖို့အတှကျ နညျးလမျးကောငျးတှကေိုတော့ ရှာတတျရမှာဖွဈပါတယျ။
လူတိုငျးက တဈယောကျတညျးအခြိနျဖွုနျးရမယျ့ ကိုယျပိုငျအခြိနျလိုအပျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ဒီလိုအခြိနျမြိုး မလိုအပျဘူးဆိုရငျတောငျမှ သငျ့ခဈြသူက လိုအပျခငျြ လိုအပျပါလိမျ့မယျ။ ခဈြသူစုံတှဲတှကေ ကျောနဲ့ကပျထားသလို အမွဲတမျးပူးကပျနလေို့ မဖွဈပါဘူး။ ကိုယျပိုငျအခြိနျမှာ သီးခွားစိတျဝငျစားမှုတှကေို လုပျဆောငျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ခဈြသူက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျသှားဖို့ ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျတညျးတဈခုခုလုပျဖို့ ပွောဆိုလာခဲ့ရငျ စိတျဆိုးစရာ၊ သံသယဖွဈစရာလို့ မတှေးသငျ့ပါဘူး။ ဒီအခြိနျမြိုးမှာ သငျကိုယျတိုငျကလညျး အခွားစိတျဝငျစားစရာတှကေို လုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။
အခြိနျအမြားစုမှာ ကြှနျတျောတို့တှကေ သိပျမစဉျးစားမဆငျခွငျပဲ အခွအေနပေိုဆိုးသှားအောငျ လုပျလရှေိ့ပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ခဈြသူက ခှငျ့လှတျတယျဆိုရငျတောငျမှ မစဉျးစား မဆငျခွငျပဲ လုပျလိုကျတဲ့ လုပျရပျတှေ၊ ပွောလိုကျတဲ့ စကားတှကေ အမွဲတမျးရှိနမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျဆိုး စိတျညဈျေနတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ဘာကိုမှမပွောမဆိုခငျ အရငျစဉျးစားပါ။ အခု ငါပွောမယျ့အကွောငျးအရာက အဓိပ်ပါယျရှိလား၊ အထောကျအကူဖွဈလာ၊ အသုံးဝငျလား၊ စာနာမှုရော ရှိရဲ့လားဆိုတာတှကေို ပွနျမေးကွညျ့ပါ။ မဟုတျရငျတော့ ဘာမှမပွောပဲ ပါးစပျပိတျထားလိုကျပါ။
၅။ ထိနျးခြုပျဖို့ ဒါမှမဟုတျ ပွောငျးလဲဖို့ ကွိုးစားခွငျး
ဒီကိစ်စက အရေးကွီးပါတယျ။ ခဈြသူရညျးစားဖွဈလာတဲ့အခါမှာ လိုခငျြတဲ့ပုံစံပွောငျးလဲဖို့ မဟုတျပမေယျ့ မသိမသာဆိုသလို့ ထိနျးခြုပျပွောငျးလဲဖို့ ကွိုးစားတတျကွပါတယျ။ နောကျတဈခါ သငျ့တို့ ခဈြသူရညျးစား ပွဿနာဖွဈတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သခြောပွနျပွီး ဆနျးစဈကွညျ့ပါ။ သငျတို့နှဈယောကျထဲမှာ ဘယျသူက ကွိုးကိုငျခယျြလှယျဖို့၊ ပွောငျးလဲဖို့၊ ထိနျးခြုပျဖို့ လုပျနတောလဲဆိုတာ ဆနျးစဈပါ။ တဈခါတဈလမှော အပျေါယံကွညျ့ရငျတော့ အဆငျပွနေတေယျထငျရပမေယျ့ သခြောဆနျးစဈကွညျ့ရငျ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ ခကျခဲနတေတျတာကို တှရေ့တတျပါတယျ။ ဘယျကိစ်စကိုမဆို သငျ့နညျးလမျးအတိုငျးပဲ ဖွဈစခေငျြတယျ၊ အရာရာကို သငျ့စိတျကွိုကျ ပုံသှငျးခငျြတယျဆိုရငျ တဖကျလူအတှကျ လကျရှိဖွဈတညျမှုက အဆငျမပွဘေူးလို့ ပွောနတောနဲ့အတူတူပါပဲ။ သငျ့ခဈြသူကလညျး သူတို့ရဲ့အမှားနဲ့ ခြို့ယှငျးခကျြတှကေို သိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သတိပေးနဖေို့ မလိုပါဘူး။ ဒီအတိုငျးထားလိုကျပါ။
အခုဖျောပွခဲ့တဲ့အမှားတှကေို အရငျကလုပျခဲ့ဖူးရငျလညျး နောကျမလုပျမိအောငျ ဆငျခွငျပါ။ အနာဂတျမှာ သငျ့အတှကျ ခိုငျမွဲပြျောရှငျရတဲ့ နားလညျစာနာမှုအပွညျ့နဲ့ Relationship တဈခုကို တညျဆောကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Previous: မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ Photo Gallery ကို မကြည့်စေချင်သည့် အကြောင်းရင်း (၅)ခု
Next: ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်စေနိုင်မည့် နည်းလမ်း(၅)ခု